5 Umthandazo woKwaphula isiqalekiso: kubomi bothando kunye neziqalekiso ezikhululweyo!
kuqala » Imithandazo » Umthandazo wokwaphula isiqalekiso
Okulungileyo umthandazo wokwaphula isiqalekiso kubomi beemvakalelo, nangaphaya, kufuneka ekubunjweni kwayo inkcazo yayo yonke into enokuthi isichaphazele.
Eli nqaku lijolise ekuboniseni ubuncinane ezi-3 ezinamandla kakhulu kuwe, zonke zijoliswe kumaqumrhu ahlukeneyo akhoyo ukuze asincede ngamaxesha anzima kakhulu.
UThixo ungamandla, nguye osinika konke ukuthanda ukuphila kwaye ukunxibelelana Naye yeyona ndlela ilungileyo yokwaphula naluphi na uhlobo lwesiqalekiso.
Ukuba ubomi bakho buqalekisiwe, nokuba kubomi bothando, ubomi bomntu, imali okanye impilo, kufuneka ususe bonke ububi kuyo ngokukhawuleza.
Masibonise umthandazo wokwaphula isiqalekiso/ isipelingi esichasene nothando, ngokuchasene nemali kunye nempilo.
Ungade uthandaze bonke bo-3 ukuba ngokwenene ujongene nezi ngxaki ebomini bakho.
1) Umthandazo wokwaphula isiqalekiso kubomi bothando
Ngaba ubomi bakho beemvakalelo bumoshakele kwaye awazi ukuba ubulungiswa njani?
Isisombululo sinokufumaneka ku umthandazo onamandla, sinomntu onamandla kakhulu kwaye unamandla kuwe abhekiswe kuThixo, yizame, iya kuba nemiphumo emihle kakhulu!
Thixo onamandla onke, ndithetha nawe namhlanje kuba ndiwadinga ngamandla amandla akho ebomini bam.
Ndinxibelelana nawe kuba ndiludinga kakhulu uncedo lwakho, ndifuna isikhokelo kubomi bam bothando.
Ndifuna nje ukonwaba kwaye ndiyazi ukuba ulonwabo eluthandweni lilungelo lethu sonke, ndicela undincede eluthandweni lwam.
Ndifuna ukuphucula ubomi bam bothando kwaye ndibe namaxesha amnandi, amaxesha okonwaba nomntu endimthanda ngokwenene nondithanda ngokwenene nam.
I need moments together with a man/ woman who know what I want and who wenelisa yonke iminqweno yam.
Ndifuna ukonwaba, ndifuna ukugxotha ezindleleni zam bonke ububi kwaye ndifuna ukwaphula zonke iziqalekiso ezinokuthi zibekwe ebomini bam beemvakalelo.
Ndicela uncedo lwakho ukuba ndiqhawule amakhubalo amabi ebomini bam, ndisuse zonke iziqalekiso ezimbi abandizilele zona kwaye ndikwazi ukuphila ubomi bothando obonwabileyo njengoko bendifanele.
Ndiyathembisa ukuba ndiza kukukhanyisa ikhandlela elimhlophe ekupheleni kwalo mthandazo.
Njengoko usenokuba uqaphele, kufuneka ulayite ikhandlela elimhlophe ekupheleni kwalo mthandazo.
Yenza njalo ngobusuku ngaphambi kokulala, kodwa akufuneki uhlale unikezela ikhandlela elimhlophe, unokunikela kuphela ngeentsuku ezi-3 zokuqala.
Ngomnye weyona mithandazo ilungileyo yokuphelisa iziqalekiso kunye neziqalekiso othandweni onokuthi uzenze.
2) Umthandazo wokwaphula isiqalekiso sezemali
UThixo unokukunceda ucombulule iingxaki zakho zemali.
Imali ayizisi ulonwabo, kodwa siyayidinga ukuze siphile ubomi obundilisekileyo ngaphandle kwemfuneko.
Inyaniso kukuba ngaphandle kwayo asinakuphila, ngoko akukho ngozi ekwenzeni umthandazo wokwaphula isiqalekiso kubomi bethu bemali.
Thixo onamandla onke, ndiphelelwe lithemba.
Ndifuna ukucela amandla aKho ukuba andincede kubomi bam bezemali.
Ndiyazi ukuba imali ayilolonwabo kodwa ndiyayidinga ukuze ndikwazi ukuphila ubomi obulula nobunyanisekileyo.
Ndijonge kuWe ukuze ndifumane amandla okwenza imali kwaye ndikhuphe onke amatyala am.
Ndijonge kuWe ukuze ufumane amandla okuhlawula yonke into endiyityala kwaye ndilawule ubomi bam.
Ndisajonge kuwe amandla ukuze imali yam iyeke ukuncipha ukusuka kwenye imini ukuya kolandelayo.
Ndiyazi ukuba andinakubawa ndicela nje ukuba ulawule ubomi bam.
Ndibongoza onke amandla aKho ukuba andincede ngokwaphula naziphi na iziqalekiso abanokuthi bazenze kum.
Ubomi bam bezemali bunamakhubalo neziqalekiso kwaye ndiyazi ukuba Wena, Thixo Wonke
Ekubeni unamandla, uya kukwazi ukubophula bonke ngamandla akhe aphakamileyo.
Iqhekeza amakhubalo neziqalekiso ezindiphosileyo kwaye indinceda ndiphile ubomi boxolo nenzolo.
Ungathandaza lo mthandazo mncinane yonke imihla nangaliphi na ixesha lemini.
Usenokuyithandaza kunye nezinye ezi-2 ezichazwe apha kweli nqaku.
3) Umthandazo owaphula isiqalekiso kunye nezibetho eziphoswe phezu kwethu
Sifumene umthandazo onamandla kakhulu kuYoutube osebenza ukwaphula iziqalekiso ezinokuthi ziphoswe ebomini bethu ixesha elide.
Ngumthandazo onamandla kakhulu wokulahla onemibono engaphezulu kwe-9 yezigidi kunye namawakawaka abantu abavumayo kunye nazo zonke iziphumo zayo. Ke, akukho sizathu sokungawasebenzisi onke amandla akho. Yizame!
4) Umthandazo wokuzikhulula kwisiqalekiso sempilo
Akukho mntu uphila ngaphandle kwempilo kwaye ngamanye amaxesha kukho abantu abayisebenzisayo ukuze benze ububi kwabanye abantu.
Isiqalekiso esibekwe kwimpilo yakho sinokubulala kwaye kufuneka kujongwane naso ngokukhawuleza.
Ngaba uyawufuna umthandazo owomeleleyo wokuzikhulula kwisiqalekiso esinamandla sempilo? Ngoko khangela apha ngezantsi.
Thixo onamandla onke ndithetha nawe namhlanje kuba ndifuna uncedo olukhawulezileyo.
Uyayazi ukuba ngaphandle kwempilo andikwazi kuphila kwaye uyayazi nawe ukuba akekho umntu onokugqiba ukuba ndiphilile na ngaphandle kwakho.
NguThixo kuphela ogqiba ngekamva lam, kodwa kukho umntu ozama ukukwenzela oko.
Ndiyazi ukuba ndine-spell cast phezu kwempilo yam kwaye ndifuna uncedo olukhawulezileyo lokuyiqhawula kwaye ndiyiphelise.
Ndize kwenza lo mthandazo mncinane kuwe wokucela uncedo lokuwuqhawula.
Thixo onamandla onke, mdali weZulu noMhlaba, ndincede ndophule esi siqalekiso sempilo sindithwaxa kakhulu.
Indinceda ndiphile ngokonwaba, ndingabi nazintlungu kwaye ndingabi neemvakalelo ezimbi emzimbeni wam.
Indinika isikhokelo ebomini, indinika izizathu zokuncuma kwaye iyabagxotha ezindleleni zam bonke abo bamosha ulonwabo lwam.
Ndicela impilo nolonwabo qha.
Ndiyazi ukuba ngamandla aKho unako ukundinceda.
Lo mthandazo ungawuthandaza yonke imihla phambi kokuba ulale okanye yonke imihla xa uvuka.
Ndiyanikhumbuza ukuba ningayithandazela kunye nezinye ezi-2 eziziswe apha.
5) Umthandazo wophula iziqalekiso zeminyanya
Sifuna ukugqiba ngowona mthandazo unamandla wobuvangeli wokuphelisa zonke iziqalekiso onokuba nazo ebomini bakho. Ngumthandazo omde oya kuYesu Krestu othembisa ukukhupha bonke ububi obunabo ebomini bakho.
Kufuneka uthandaze nje kangangeentsuku ezisi-7 ngqo, ukuzama ukusoloko ugcina ucwangciso olufanayo. Ke, yiba nalo apha ngezantsi ukuprinta okanye ukugcina kwiselfowuni yakho.
Iingcebiso eziluncedo xa usenza umthandazo wokwaphula isiqalekiso
Yazini ngoku ukuba akwanelanga ukucela uThixo ukuba asincede, hayi ngokwenene.
Abantu abaninzi bacinga ukuba kwanele ukuthandaza nokulinda izinto ezintle, kodwa akusoloko kunjalo.
Kubalulekile ukuba ube nokholo oluninzi kwaye ukholelwe ukuba baya kukunceda ngokwenene, kufuneka ukholelwe ngokuqinileyo kuThixo kwaye ukholelwe kumandla akhe kunye namandla akhe okwenyaniso.
Hlala uthandaza ngokholo olukhulu kwaye ukholelwe kwinto oyenzayo, nantso ke imfihlelo yomthandazo wokwaphula isiqalekiso ukusebenza.
sebenzisa oku umthandazo onamandla wokwaphula isiqalekiso yonke imihla.
Iya kubuphucula ubomi bakho ngendlela egqithisileyo.
Yiba nokholo oluninzi kwaye usoloko uthembele kuncedo lukaThixo.
<< Buyela eminye Imithandazo
1 1) Umthandazo wokwaphula isiqalekiso kubomi bothando
2 2) Umthandazo wokwaphula isiqalekiso sezemali
3 3) Umthandazo owaphula isiqalekiso kunye nezibetho eziphoswe phezu kwethu
4 4) Umthandazo wokuzikhulula kwisiqalekiso sempilo
5 5) Umthandazo wophula iziqalekiso zeminyanya
5.1 Iingcebiso eziluncedo xa usenza umthandazo wokwaphula isiqalekiso